Farmaajo oo shaaciyey inuu R/W Rooble gudan waayey waajibaadkiisa, ku baaqay shir | dalkaan.com-Wararka ugu danbeeyay ee soomaaliya
Home Warkii Farmaajo oo shaaciyey inuu R/W Rooble gudan waayey waajibaadkiisa, ku baaqay shir
Farmaajo oo shaaciyey inuu R/W Rooble gudan waayey waajibaadkiisa, ku baaqay shir
Muqdisho (Caasimada Onine) – Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ku dhawaaqay in Ra’isul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble uu gudan waayey waajibaadkii loo igmaday ee doorshada Soomaaliya.
Madaxweynaha ayaa ku baaqay inay kulan deg deg ah isugu yimaadaan madaxda maamul goboleedyada dalka iyo Gobolka Banaadir si looga wada hadlo wax uu ugu yeeray “jiheynta doorashada.”
Halkaan hoose ka akhriso warka kasoo baxay Farmaajo
BAAQ KU SAABSAN DHAB-U-JIHEYNTA DOORASHOOYINKA
Diseembar 26, 2021.
In Ra’iisul Wasaaruha uu gudan waayay waajibaadkii loo igmaday ee ahaa hogaaminta doorasho ku dhisan Heshiiskii 17kii Sebtember 2020 iyo habraacyadii dhammeystirayay ee soo baxay 1-dii Oktobar 2020;
Madaxweynuhu wuxuu ku baaqayaa in la isugu yimaado shir wadatashi ah oo lagu saxayo jihaynta doorashooyinka kaas oo ay kasoo qeybgalayaan Goleyaasha Dowladda ee Heer Federaal, Dowlad Goboleedyada iyo Gobolka Banaadir si la isugu waafaqo hoggaan awood u leh hirgelinta doorasho dhammeystiran oo si hufan dalka uga dhacdo.
Madaxweynuhu wuxuu ku baaqayaa in la dhagaysto talooyinka waxgaradka, siyaasiyiinta, iyo bulshada rayidka ah ee qaba tabashooyinka la xiriira doorashooyinka si loo helo hannaan doorasho oo ku dhammaada jawi nabdoon oo loo siman yahay.
ReVision (also known as ReVision 2.0) is an eye health-boosting product designed for those who are on the edge of losing their vision, experiencing...
MADAXWAYNE ISMAACIIL CUMAR GEELLE OO MARKII 5-AAD XILKA ...
Horudhac: Chelsea Vs Leeds United ee Horyaalka Premier League-ga, Wararka Labada...
Caga-jiidka maamul gobolleedyada ee doorashada. Qaylo-dhaanta Mucaaradka iyo aamusnaanta Farmaajo.
Baaritaanka kiiska Ikraan Tahliil oo la hor istaagay. Xarunta NISA oo...
Hanti Dhowraha Qaranka oo dagaal toos ah ku qaaday Farmaajo.
Labo Kamid Ah Xidigaha Kooxda Real Madrid oo laga helay Corona
Xog: Ciidamada Farmaajo iyo Rooble ee isku hor-fadhiya Villa Somalia oo...